Heks (2020) | MM Movie Store
2020 ခုနဈထှကျ Horror အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ…ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဒီလိနျးက ပနျးခြီပညာကို စှနျ့လှတျပွီး ဘားတဈခုမှာ အလုပျလုပျနတောပါ။ဒီလိနျးရဲ့အမဖွေဈသူ ကယျလီကတော့ အမွဲတမျး ပြျောရှငျတကျကွှနတေတျပွီး အစအနောကျလညျးသနျတဲ့သူပါ…
ကယျလီက တောငျအာဖရိကမှာ ကွီးပွငျးလာတာကွောငျ့ အဲဒီမှာပဲအခွခေခြငျြတယျလို့ဒီလိနျးကိုပွောလာပါတယျ… သားအမိနှဈယောကျ video call နဲ့ စကားပွောနခြေိနျမှာပဲ ကယျလီကို လူတဈယောကျက လာသတျသှားပါတယျ။
ဒီလိနျးလညျး တောငျအာဖရိကကို လိုကျသှားခြိနျမှာ ကယျလီရဲ့အမွှာညီမလီဆာနဲ့ပွနျဆုံပွီး သူ့အမရေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ လူသတျသမားက ဘယျသူလဲဆိုတာကို ဖျောထုတျဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ။
ဒီကားလေးဟာ ၁၄ ဒီဇငျဘာက ထှကျရှိထားပွီး . Horror ကောငျးကောငျး မြှျောနသေူတှအေတှကျတော့Rating အမွငျ့နဲ့ ကွညျ့လို့ကောငျးမယျ့ ကားလေးဖွဈသလို . တဈခြို့အခနျးတှမှော မထငျမှတျတဲ့နရောတှကေနခွေောကျလှနျ့ပွတာတှကေ Horror Movie တဈကားကို ပိုပိုပွီး ပံ့ပိုးပေးထားတာတှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ . . .
အဓိကကတော့ ပိုစတာထဲမှာပါတဲ့ မကျြနှာဖုံးပါပဲ . . .
2020 ခုနစ်ထွက် Horror အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒီလိန်းက ပန်းချီပညာကို စွန့်လွှတ်ပြီး ဘားတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ဒီလိန်းရဲ့အမေဖြစ်သူ ကယ်လီကတော့ အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတတ်ပြီး အစအနောက်လည်းသန်တဲ့သူပါ…
ကယ်လီက တောင်အာဖရိကမှာ ကြီးပြင်းလာတာကြောင့် အဲဒီမှာပဲအခြေချချင်တယ်လို့ဒီလိန်းကိုပြောလာပါတယ်… သားအမိနှစ်ယောက် video call နဲ့ စကားပြောနေချိန်မှာပဲ ကယ်လီကို လူတစ်ယောက်က လာသတ်သွားပါတယ်။
ဒီလိန်းလည်း တောင်အာဖရိကကို လိုက်သွားချိန်မှာ ကယ်လီရဲ့အမြွှာညီမလီဆာနဲ့ပြန်ဆုံပြီး သူ့အမေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ လူသတ်သမားက ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။
ဒီကားလေးဟာ ၁၄ ဒီဇင်ဘာက ထွက်ရှိထားပြီး . Horror ကောင်းကောင်း မျှော်နေသူတွေအတွက်တော့Rating အမြင့်နဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ကားလေးဖြစ်သလို . တစ်ချို့အခန်းတွေမှာ မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေကနေခြောက်လှန့်ပြတာတွေက Horror Movie တစ်ကားကို ပိုပိုပြီး ပံ့ပိုးပေးထားတာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် . . .
အဓိကကတော့ ပိုစတာထဲမှာပါတဲ့ မျက်နှာဖုံးပါပဲ . . .
9-1-1: Lone Star (Season1)၊ အပိုငျး (၄)